पति को वशमा गर्न को लागी प्रार्थना। ? [तपाइँको विवाह फिर्ता लिन को लागी]
पतिलाई वशमा पार्न प्रार्थना गर्नुहोस्घरमा सद्भाव कायम राख्नु सधैं गाह्रो काम हो र कहिलेकाँही ईश्वरीय मद्दत चाहिन्छ। पतिलाई वशमा पार्न प्रार्थना तपाईंको प्रेममा अधिक धैर्यता, शांति र सन्तुलन ल्याउनुहोस्.
प्रत्येक व्यक्ति जीवनमा कठिन परिस्थितिहरूमा फरक प्रतिक्रिया गर्दछन्। यदि तपाईंको श्रीमान्ले काममा धेरै तनाव महसुस गरिरहनुभएको छ वा चीजहरू उसको योजना अनुसार चल्दैन भने, एक विचलित पतिलाई शान्त पार्न यो प्रार्थना भन्नुहोस्।
यो धेरै सामान्य छ कि जटिल क्षणहरूको सबै तनाव पारिवारिक वातावरणमा reverberates। यदि तपाइँको पार्टनरले एक अधिक मात्रामा दु: ख भोग्नु भएको छ भने, रिसाएको र तत्कालै पतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रार्थना तपाईको लागि ठीक समयमा आयो।
विश्वास संग यो घर मा सद्भाव बहाल गर्न सम्भव छ र तिम्रो विवाह खुशी हुनेछ.
1 पतिलाई वशमा पार्न प्रार्थना गर्नुहोस्
2 जरूरी पतिलाई वशमा पार्न प्रार्थना गर्नुहोस्
3 पतिलाई वशमा पार्न सन्त अमान्सोको प्रार्थना
4 घरेलु पतिलाई प्रार्थना - सेन्ट टेमे
5 घरेलु पतिलाई प्रार्थना - सेन्ट क्याथ्रीन
6 कसरी पतिको प्रार्थना गर्न प्रार्थना गर्न
“प्रभु, अहिले म तपाईको उपस्थितिमा प्रवेश गर्छु। प्रभु महान् हुनुहुन्छ, प्रभु सामर्थी हुनुहुन्छ, प्रभु एक हुनुहुन्छ, तपाईं बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन र तपाईं मात्र मेरो विवाहलाई सफल बनाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो श्रीमान्लाई राम्रो मान्छे बन्न, शान्त हुन, मलाई अझ बढी आदरपूर्वक व्यवहार गर्न, म र हाम्रा बच्चाहरूसित राम्रो व्यवहार गर्न मद्दत गर्नुहोस्। यसले उनलाई पति, बुबाको रूपमा, परिवारको शिरको रूपमा कसरी सुधार गर्ने भनेर सिकाउँछ। म मेरो विवाह सफल भएको चाहान्छु, तर यो समस्या हाम्रो सम्बन्धको लागि निराश पार्दछ। र मलाई बुद्धि दिनुहोस् ताकि म आफ्नो पतिलाई मेरो मनोवृत्ति हेर्ने र सुधार गर्ने प्रेरणाको साथ, शान्त, कम रिसाउने, मायालु र मेरा अधिक साथीहरू हुने उद्देश्यले व्यवहार गर्न सक्छु। मैले प्राप्त गरेको आशीर्वादको लागि अग्रिम धन्यवाद। र म तपाइँलाई फेरि उनलाई सोध्छु कि कसरी उसको साथमा व्यवहार गर्न मलाई उसको पथ परिवर्तन गर्न। आमेन।
जरूरी पतिलाई वशमा पार्न प्रार्थना गर्नुहोस्
“ओह, शक्तिशाली सन्तहरू!
कि तपाईं मेरो हृदयबाट आएको कराई बुझ्न सक्नुहुन्छ।
त्यो मैले महसुस गरेको प्रेम महसुस गर्न सक्दछ (उदाहरण को लागी, एक प्रियको नाम)।
म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, मलाई जित्ने सहयोग दिनुहोस् (प्रिय व्यक्तिको नाम भन्नुहोस्) निश्चित रूपमा, (तपाईंको जीवनमा के भइरहेको छ भन्नुहोस्) र मैले तपाईंलाई सदाका लागि गुमाउन सक्छु भन्ने महसुस गर्नुहोस्!
मेरो लागि अन्तर्बिन्ती गर्नुहोस्, तपाईंको मुटुलाई शान्त पार्नुहोस् जुन ढु stone्गा जस्तो देखिन्छ।
यदि एक मूर्ख गधा पनि तपाईं द्वारा पालेको छ, तब मलाई थाहा छ कि मेरो अनुरोध सम्भव छ। आमेन
पतिलाई वशमा पार्न सन्त अमान्सोको प्रार्थना
घरेलु पतिलाई प्रार्थना - सेन्ट मार्क
«(यहाँ व्यक्ति को नाम तपाइँ शान्त गर्न चाहानुहुन्छ) भन्नुहोस्,
सेन्ट मार्क तपाईंलाई शान्त र यो क्रोध र क्रोध कम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफैंमा सधैं रहनुहुन्छ, जसले तपाईंको आत्मा र तपाईंको आत्मालाई नरम तुल्याउँछ।
(यहाँ शान्त हुन चाहेको व्यक्तिको नाम भन्नुहोस्),
सेन्ट मार्कले सिंह, सर्प र अकल्पनीय जीवहरूलाई तालिम दिएका छन् र आफ्नो शक्तिले उसले उनलाई वशमा पार्न सक्छ, आफ्नो क्रोध, क्रोध र सबै स्नायुहरू जहिले पनि उसले बोकेको छ।
सान मार्कोसले तपाईंको मुटु छुन्छ, यसलाई नरम बनाउँदछ, हल्का र अधिक भावनात्मक बनाउँदछ।
यसले तपाईंको आत्मालाई छुन्छ र यसलाई सबै क्रोधबाट स्वतन्त्र पार्दछ र सबै विद्रोहहरू यसलाई समावेश गर्दछ।
यसले तपाईंको शरीरलाई हल्का, स्वतन्त्र र शान्त बनाउनेछ।
सेन्ट मार्क आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी तपाईंलाई शान्त गराउँदछ र तपाईंको क्रोधलाई हटाउँदछ जुन तपाईं जन्मनु भएको थियो। यसले यो भयानक चिह्न हटाउनेछ कि तपाईं एक फरक व्यक्ति, एक राम्रो र शान्त व्यक्ति हुनुहुन्छ।
(व्यक्ति शान्त हुन चाहेको व्यक्तिको नाम भन्नुहोस्),
म येशू ख्रीष्टलाई कसम दिन्छु कि उनले क्रूसलाई यति ठूलो पीडा सहनु भयो कि उनी खुशी हुनेछन र सदाको लागि सदा सर्वदा व्यवहार गर्नेछन् कि अबदेखि उनी अर्कै मान्छे हुनेछन् र पहिले जस्तो घबराउन पनि सक्तैनन्।
तपाइँ एक पटक र सबै को लागी यो सबै क्रोध बाहिर निकाल्नुहुनेछ र तपाइँ एक राम्रो र शान्त व्यक्ति हुनुहुनेछ।
घरेलु पतिलाई प्रार्थना - सेन्ट टेमे
«(नर्भस पतिको नाम भन्नुहोस्),
सेन्ट मीकले तपाईलाई चिनो लगाओस्, सेन्ट मीकले तपाईलाई शान्त गराउनुहोला र येशू ख्रीष्टले तपाईलाई नरम बनाउनुहो
सेन्ट टेमेले यो रोष र क्रोध हटाउन सक्छ जसले कहिलेकाँही गलत मानिसहरूलाई छोडिदिन्छ।
(नर्वस पतिको नाम भन्नुहोस्),
संत मेकले यो द्रुत क्रोध समात्न र यसलाई टाढा लिन सक्छ। तपाईंको सबै समस्याहरू गाड्नुहोस् र तिनीहरूसँग सम्बन्धित सबै क्रोधको साथ ठीक गर्नुहोस्।
शक्तिशाली र बुद्धिमान सेन्ट टेमले तपाईंको परिवारलाई दुख दिन्छ र तपाईंले श be्गित सुन्नुहुन्छ कि त्यो खराब जादूलाई हटाउनको लागि प्रबन्ध गर्नुहोस्।
सेन्ट टेमेले तपाईलाई निको पार्नेछ, यस सबै क्रोधलाई हटाउनुहुनेछ, यी सबै पीडा र बिना कारण क्रोध र रीस नमानी सबै समस्याहरूको सामना गर्न तपाईलाई बलियो बनाउँदछ।
सेन्ट टेमे, मेरो श्रीमान्को सबै रिसलाई निको पार्छन्, उनको जीवनको सबैभन्दा कठिन र तनावपूर्ण क्षणहरूमा उनलाई वशमा राख्छिन्।
तपाईंको आत्मा, व्यक्ति र व्यक्तित्व अधिक लचिलो हुन र खराब चीज आउने छ कि मद्दत गर्नुहोस्।
सेन्ट टेम तपाइँलाई वशमा पार्नुहुनेछ, तपाइँलाई शान्त पार्नुहुनेछ र तपाइँसँग भएका सबै नराम्रो चीजहरु लाई हटाउनुहुनेछ।
घरेलु पतिलाई प्रार्थना - सेन्ट क्याथ्रीन
"सान्ता क्याटेरिना, तपाईले आफ्नो जीवनमा यत्ति धेरै दुःखकष्ट भोग्नु भयो, तपाई जो कोही पनि आउनु पर्ने अयोग्यताको सामना गर्नु भएको छ, म तपाईलाई मेरो परिवार र मेरो श्रीमान्लाई भेट्न मद्दत गर्दछु (पतिको पूरा नाम भन्नुहोस्)।
ऊ एकदम नर्भस छ, धेरै रिसाएको छ र आक्रामक पनि छ, र मलाई थाहा छ म खुशी हुन सक्दिन।
मँ यो मौका दिन चाहन्छु, र केवल एक, त्यसैले म तपाईंलाई यो शान्त गर्न मलाई मद्दत गर्न आग्रह गर्दछु।
मेरो श्रीमान्‌ सान्ता कतारिनालाई शान्त गर्नुहोस्, उनको मुटु शान्त गर्नुहोस्, उसका विचारहरू शान्त गर्नुहोस्।
यसले तपाईंलाई तपाईंको जीवनका सब भन्दा जटिल पलहरूसँग, विशेष गरी सबैभन्दा तनावपूर्ण समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ, र तपाईंको स्नायुहरूलाई हरेक दिन, हरेक रात र हरेक मिनेट विस्फोट हुनबाट रोक्छ।
यसले तपाईंको मुटुमा शान्तिकरण गर्दछ, तपाईंलाई मानसिक र भावनात्मक राहत दिन्छ र तपाईंको दिमागमा सबै नराम्रो विचारहरू फिक्काउँछ जुन तपाईं घबराउनुहुन्छ।
मलाई यो डरलाग्दो दिनमा सान्ता क्याटरिनामा मद्दत गर्नुहोस्।
मलाई, मेरो परिवार र मेरो पतिलाई मद्दत गर्नुहोस् ताकि हामी अन्ततः साँच्चिकै खुशी हुन सक्दछौं।
म तपाईंमा सान्ता क्याटरिनामा विश्वास गर्दछु। आमेन
कसरी पतिको प्रार्थना गर्न प्रार्थना गर्न
यहाँ प्रस्तुत घरेलु प्रार्थनाहरू सँगै वा अलग प्रार्थना गर्न सकिन्छ। उनीहरूको प्रार्थना गरेर उनी आफ्नो पतिलाई आश्वासन दिन मदत माग्दा शान्त हुन्छिन्।
यदि तपाईं यी प्रार्थनाहरू विभिन्न सन्तहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। यो अझ राम्रो छ किनकि यसले तपाईंको अनुरोध पूरा हुने सम्भावना बढाउँदछ।
एक पतिलाई वशमा गर्न प्रार्थना हरेक दिन गर्न सकिन्छ। आदर्श रूपमा तपाईले आफ्नो दिनचर्यामा यो विशेष समयमा प्रवेश गर्नुपर्दछ सधैं प्रार्थना गर्न सम्झनुहोस्। जति तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईंको सम्बन्ध बढ्दै छ।
जब एक पतिलाई वशमा राख्न प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईसँग ठूलो विश्वास र विश्वास हुनुपर्दछ कि प्रभुले तपाईको पार्टनरलाई अझ शान्त र निर्मल बनाउँन कार्य गर्नुहुनेछ, तपाईको परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि।
तर सावधान रहनुहोस्: एक वाक्य मात्र प्रभावकारी हुन्छ यदि यसको अभिप्राय राम्रो छ। यदि तपाईले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउनको लागि आफ्नो पतिलाई शान्त पार्न चाहानुहुन्छ, र ऊ उत्तम मानिस हुन्छ भने, तपाईं सही मार्गमा हुनुहुन्छ।
तर यदि तपाई आफ्नो पतिलाई उसको सेवक बन्न शान्त पार्न चाहानुहुन्छ भने, यो प्रार्थनाले कुनै खास काम गर्दैन। एक पतिलाई वशमा पार्न प्रार्थना मात्र कार्य गर्दछ जब उसको मुटुमा मनसाय अभिव्यक्त हुन्छ।
यो दिनचर्यामा घुसाउनुहोस् र तपाईंको परिवारमा शान्ति ल्याउने अर्को भिडियो पनि नुहाउनुहोस्।
(इम्बेड) https://www.youtube.com/watch?v=dS5XLaNQMww (/ सम्मिलित)
पनि सिक्नुहोस् विवाह पुनर्स्थापना गर्न प्रार्थना.